Madaxweynaha Soomaaliya oo si adag uga hadlay Afgembigii dalka Turkiga - iftineducation.com
Madaxweynaha Soomaaliya oo si adag uga hadlay Afgembigii dalka Turkiga
aadan21 / July 16, 2016
iftineducation.com – Madaxweynaha Dowladda Federalka Somalia, waxa uu si kulul u cambaareeyey Isku-daygii Afgembi ee xalay ka dhacay dalka Turkiga. Kadib, markii ay Koox ka tirsan Saraakiisha Milliteriga Turkiga isku tijaabiyaan inay carqaladeeyaan Deganaanshaha iyo Dimuqraadiyadda Turkiga.
“Waa wax aan la aqbali Karin in la afgembiyo Nidaamka Dimuqraadiyadda ee ay dadka Turkiga ku soo nolol qaateen” ayuu yiri Madaxweynaha oo Isku-dayga Afgembiga fashilmay ku tilmaamay nasiib-xumo.
Waxa uu intaasi ku daray inay Dowladda Somalia ku faraxsan tahay in laga guuleystay Ciiddanka Shaydaanka ee doonayey inay Turkiga u rogaan dhul colaadeed.
Madaxweyne Xasan Sheekh waxa uu tilmaamay inay Dowladda Federalka taageero buuxda siinayaan Madaxweynaha Turkiga, Rajab Dayib Erdogan, wuxuuna u rajeeyey Dadweynaha iyo Hoggaamiyayaasha Turkiga inay ku sii naaloodaan Midnimo, Nabad, Deganaansho iyo in la xushmeeyo Dastuurka Qaranka Turkiga.
Daawo Sawirada” Shacabka Turkiga oo isku dhigaya Dushana ka fuulaya Taangiyada ay Milatariga Wataan
Qaar kamid ah Askartii ka qeyb qaadatay Afgembigii Fashilmay ee dalka Turkiga oo la qabtay (Daawo Sawirada)